Nivadika ho Blagy Ny Raharaha Famonoana Ireo Mpivady Mpanao Gazety Tao Bangladesh
MpanoratraArif Hossain Sayeed
Voadika ny 08 Novambra 2012 10:06 GMT
Tamin'ny 11 Febroary 2012, nisy namono tamin'ny fomba feno habibiana tao amin'ny trano nofainy tao andrenivohitra ilay tonian-dahatsoratra tao amin'ny fahitalavitra Maasranga, Sagar Sarwar sy ny vadiny izay mpanao gazety ao amin'ny ATN Bangla, Meherun Runi (Jereo ny lahatsoratra ato amin'ny Global Voices [mg] )। Tamin'izany andro izany, nanambara ny Minisitry ny Atitany Sahara Khatun tamin'izany fotoana fa ho voasambotra ato anatin'ny 48 ora ireo nahavanon-doza. Taorian'izay fe-potoana izany, marobe ireo fihetsiketsehana notontosain'ny bilaogera sy ny mpanao gazety. Saingy tsy nahitana mangirana ny fandehan'ny famotorana. Vao haingana, nisy ny fanovana toerana teo amin'ny minisitra ny Atitany ary i Dr. Mohiuddin Khan Alamgir no nandray ny toerana avy eo.
Tamin'ny 28 Aprily 2012, nanatontosa hetsika feno loko tamin'ny arabe ny bilaogera ho fanoherana ny famonoana ny mpivady. Loharano: BDNews20.com blog
Asif Nazrul, mpampianatra lalàna ao amin'ny Oniversité Dhaka Univerisity nilaza tao amin'ny pejy Facebook hoe Ny marina no takianay mikasika ny nahafaty an'i Sagar-Runi